De La Terre: Ukuhlala kwiFama - I-Airbnb
De La Terre: Ukuhlala kwiFama
Simi kumhlaba weehektare ezingama-50, sinezilwanyana ezininzi ezahlukeneyo ezibandakanya iihagu, iigusha, iibhokhwe, iinkukhu, amadada namarhanisi. Okubandakanyiweyo ekuhlaleni kwakho kukufikelela kuhambo lwethu lwasefama. Uneenkuku zakho ezibekwe ngaphandle kwendlwana apho unokuqokelela khona amaqanda akho amatsha kwihoko qho kusasa. (Qaphela: ayifumaneki ngoku ngenxa yezithintelo ze-covid-19)
Indawo yethu yokuhlala:
I-cottage ngokwayo inika ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye ne-hob yombane kunye ne-oven, ifriji enefriji encinci, iketile kunye nomatshini wekhofi. Zonke izitya kunye nezixhobo zibonelelwa kunye nezinto ezibalulekileyo zokupheka. Uya kuba nokufikelela kwimifuno emitsha evela egadini ngayo nayiphi na iimfuno zakho zokupheka okanye ukwenza iti. Phezulu, igumbi lokulala elamkelekileyo linika ubungakanani benkosi kunye nebhedi enye. Igumbi lokuhlambela elicocekileyo nelikhoyo linendawo enkulu yokuhamba kwishawari. Iitawuli zikhona. Unokufikelela kwi-bbq nangaphandle kwendawo yokuhlala kunye nokhetho lwemidlalo yangaphakathi nangaphandle.
Okubandakanyiweyo ekuhlaleni kwakho kukufikelela kuhambo lwethu lwasefama. Uhambo lwenzelwe ukuba iindwendwe zethu zikwazi ukubona ezinye zezilwanyana zethu, kunye nokukwazi ukonwabela indawo yethu ezolileyo ngelixa ubukele izilwanyana zasendle. Sineebhentshi kunye neendawo zepikiniki, iindawo zokubukela, kunye neendawo ezininzi zokuhlala zezilwanyana zasendle ukukhusela nokukhuthaza izilwanyana zethu zasendle ukuba zenze ifama yethu ibe likhaya labo.
Uneenkuku zakho ezibekwe ngaphandle kwendlwana ngexesha lokuhlala kwakho, ukuze ukwazi ukuqokelela amaqanda akho amatsha kwihoko rhoqo kusasa. (ifumaneka kuphela phakathi kwe-1st April-1st October)
KUBALULEKILEYO: Ngenxa ye-Covid-19, okwangoku akukho ukufikelela kwiipaki zezilwanyana. Izilwanyana zisenokubonakala kuhambo lwethu lwasefama kodwa awukwazi ukungena kwiipaki zazo ukuze uzichukumise. Oku kuquka ukufikelela kwiinkukhu ukuze ungakwazi ukuziqokelelela amaqanda akho. Siyaxolisa ngayo nayiphi na inkxamleko eyenziwe.
Simi ngaphandle kwelali, kumgama oziimitha ezingama-800 ukusuka kwindawo yokubhaka yelali apho unokuthenga isonka sakho kunye neecroissants zintsha yonke imihla (ngaphandle kwangolwesithathu). Le lali ikwanazo neposi, ibhari kunye neendawo zokulungisa iinwele. Singaphakathi kweNormandy Maine National Park emangalisayo, ejikelezwe lihlathi, kwindawo efanelekileyo yokufikelela kwi-GR22 (edlula ngqo kwilali yethu) kunye nezinye iindlela ezininzi zokuhamba, ukukhwela ibhayisekile nokukhwela amahashe. Sikumda weNormandy neMayenne, iindawo ezimbini zaseFransi ezinokunikelwa okuninzi. Kukho iindawo ezingenakubalwa zokutyelela kunye nezinto zokwenza kule ndawo kubandakanya i-Chateaus kunye neenqaba, imilambo kunye namachibi, iipaki zezilwanyana kunye ne-zoo, ukukhwela ihashe, ukukhwela inqanawa kunye ne-kayaking, imiboniso yehashe eyaziwayo eLa Michaudière, amachibi okubhukuda angaphakathi nangaphandle, umdyarho wamahashe. nokunye okuninzi. ILa Ferte Mace ingaphantsi kwemizuzu engama-20 xa uqhuba kwaye inechibi elihle lokuqubha apho ungaya kuloba khona, uqeshe iibhayisekile ukuba ujikeleze echibini, uhambe ngokubheqa, uqeshe iipedalo kwaye wonwabele i-ayisikrimu okanye i-crepe ngasechibini. Kukwakho nebala legalufa kunye neziko lokukhwela ecaleni kwechibi kunye neevenkile ezinkulu ezininzi, iivenkile kunye neendawo zokutyela ezinkulu. I-Bagnoles de L'Orne, idolophu ye-Spa edumileyo ikumgama nje wemizuzu engama-25 kwaye inespas, ibala legalufa, iindawo zokutyela ezintle kunye neevenkile ezintle ze-boutique, icinema kunye nekhasino echibini elihle. I-Saint-Céneri-le-Gérei, ivotele eyona lali intle eFransi kukumgama nje wemizuzu engama-25 kwaye sikwaluhambo olulula kakhulu lweeyure ukuya eLe Mans, kuhle ukuba ufuna ukuya kumdyarho wehlabathi odumileyo weeyure ezingama-24 okanye eminye iminyhadala.
Njengoko singabalimi sihlala sisebenza emasimini kodwa siya kuqhagamshelwana naye ngomnxeba.
Inombolo yomthetho: 0632735059
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lignières-Orgères